तपाइको व्यक्तिगत विवरण यसरि प्रयोग हुन्छ इन्टरनेटमा ! हेर्नुहोस | - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५ समय: १६:०६:५४
फेसबुकमा प्रयोग भएका डाटा असुरक्षित रहेको विषय निकै चर्चामा छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले एप्समार्फत फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा व्यक्तिका बारेमा आवश्यक जानकारी लिन प्रयोग गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि फेसबुक निकै आलोचितभयो ।डाटाको सुरक्षाको प्रश्नमा गुगल पनि फेसबुक जस्तै कमजोर छ । यसको अर्थ गुगलमा भएका डाटालाई उसले विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।
गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशेष प्रकारको प्राइवेसी नीति बनाएको छ । ती सबै डाटा गुगलले आफ्ना लागि मात्र होइन, आफ्ना साझेदारहरूसँग समेत सेयर गर्न सक्छ ।कुनै प्रकाशक, विज्ञापन दिने संस्था तथा गुगलसँग जोडिएका सबै वेबसाइटलाई उसले ती डाटा उपलब्ध गराउन सक्छ । गुगलसँग भएका सबै डाटा हेर्न google.com/takeout मा लगअन गर्न सकिन्छ ।
यदि कुनै मोबाइल फोनमा लोकेसन ट्रयाकिङ एक्टिभ भैरहेको छ भने गुगलले उक्त व्यक्तिको लोकेसनका सम्बन्धमा सबै जानकारी पाइरहेको हुन्छ । यति मात्र होइन, गुगलले उक्त व्यक्ति कुन दिन, कुन सहर र कुन होटलमा बसेको थियो भन्ने कुराको जानकारी सिलसिलाबद्ध ढंगले स्टोर गरेर राख्छ ।मोबाइल फोन, पीसी वा ट्याब्लेट आदिबाट कुन चिज वा वस्तुका बारेमा सर्च गरिएको थियो भन्ने जानकारीसमेत गुगलसँग हुन्छ । एन्ड्रोइड मोबाइल वा कुनै ब्राउजरको सहयोगले प्रयोग गरिएका सबै एपको जानकारी गुगलसँग हुन्छ । कहिले र कुन अवस्थामा किन त्यसको प्रयोग गरियो भन्ने जानकारी समेत गुगलसँग हुन्छ ।
हामी दिनहुँ कुनै न कुनै एप प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं र आफ्ना गतिविधिहरूको जानकारी दिइरहेका हुन्छौं । त्यसैले कुनै व्यक्ति कहिले सुत्छ वा उठ्छ भन्ने जानकारीसमेत गुगलले पाइरहेको हुन्छ ।त्यसैगरी उसलाई हाम्रो दिनभरको रुटिन पनि थाहा हुन्छ । हामी आफ्नो घर वा अन्य स्थानका बारेमा पनि गुगललाई जानकारी दिइरहेका हुन्छौ । त्यसैले हाम्रो घर र त्यसको लोकेसनका बारेमा पनि गुगलसँग जानकारी हुन्छ ।
युट्युबमा हामी के हेर्छौं र के हेर्न रुचि छ सबै कुरा गुगललाई थाहा हुन्छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका ग्याजेट वा अन्य प्रोडक्टका बारेमा समेत ऊसँग तथ्यांक हुन्छ । कुनै प्रोडक्ट वा विज्ञापनका बारेमा सूचना दिने वेबसाइट कति समय हेरियो र हाम्रो रुचि केमा छ भन्ने कुरा पनि गुगल तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ ।
जीमेलका कारण यसको इतिहास सबैलाई थाहा हुने त भै नै हाल्यो । यसमा सेभ भएका मात्र होइन, स्पाम र डिलिट भएका मेल समेत हुन्छन् । त्यसले कसैलाई कस्तो मेल आयो र गयो भन्ने सबै जानकारी गुगलसँग हुन्छ ।कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई कुन रोग लागेको छ भन्ने कुरा पनि गुगलले थाहा पाउँछ । हामी कुनै रोग लागेको शंका लागे वा कुनै रोगका बारेमा जान्न मन लागे त्यसका बारेमा विभिन्न जानकारी खोजिरहेका हुन्छौं वा युट्युबबाट त्यसका बारेमा जानकारी बटुलिरहेका हुन्छौ । यसबाट गुगलले हाम्रा बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ ।
त्यसैगरी कुनै व्यक्तिको आम्दानी कति छ, त्यसको स्रोत के हो ? कतै घुम्न जाने योजना छ कि छैन ? त्यसका लागि हवाई टिकट, बस टिकट, होटल आदिको व्यवस्था के छ ? सबै कुरा गुगलले थाहा पाइरहेको हुन्छ ।यसबाहेक गुगल क्यालेन्डरमा राखिएका सबै इभेन्ट, इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएका सबै फाइल तथा इमेज, गुगल ड्राइभमा अपलोड वा डाउनलोड गरिएका फाइल, मोबाइलमा खिचिएका सबै तस्बिर, सर्च गरिएका सबै सफ्टवेयर एवं एप, आफ्नो उमेर वा लिंग, जागिरका लागि दिइएका निवेदन आदि सबै जानकारी गुगलसँग सुरक्षित हुन्छन् ।